Blockchain Izindaba 11 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Regulator Ex-lwezezimali: Ngifisa sengathi ngabe etshaliwe Bitcoin lapho ngitshela wonke umuntu ukuba uqaphele
Umlawuli Owabe zezimali Bart Chilton ufisa wayekade atshalwe bitcoin nezinye cryptocurrencies ethandwa emuva lapho uPawulu wayeqinisekisa wonke umuntu ukuba uqaphele.
Chilton uthi kungcono kusese “Wild West” ngaphandle ikusasa lezimakethe ezilungisiwe, kodwa wanezela ezinkulu intengo iyehla iyenyuka soloko “wazotha phandle.”
Fisco Japan imemezela ukwethulwa cryptocurrency Isikhwama
Japanese ucwaningo utshalomali eqinile futhi bitcoin exchange opharetha Fisco limemezele ukuthi bazosungula Isikhwama cryptocurrency.
Coming emva ngokuqinile wakhipha isibopho bitcoin ngonyaka odlule, entsha mfihlo Isikhwama ukutshala ezingaphezu kuka 300 million yen ($2.66 abayizigidi ezingu) e bitcoin nezinye zezimali digital, ngokuvumelana Nikkei.
Isikhwama ozibiza ngqa Japan.
Arizona izishaya ukwethula bill ukuvumela izakhamuzi ukuba akhokhe izintela kanye Bitcoin
A umthethosivivinywa omusha ungeniswe kumphatsi wesifundvo Arizona iSigele obungenza, kokuvunyelwa, uvumele abantu ukuba bakhokhe intela yabo izikweletu state usebenzisa bitcoin noma ezinye cryptocurrencies.
kumarekhodi omphakathi abonisa ukuthi umthethosivivinywa - lixhaswe ngezimali yi-state Senator Warren Petersen co abaxhaswe ngamanye izishaya ezintathu - kuhanjiswe ukucabangela ngomhla ka-Jan. 9. Kusukela ngaleso sikhathi liye wabhekisela Arizona iSigele Imithetho eKomidi amakhanda okwengeziwe.
Ngokusho umbhalo, Nesilinganiso ezongenza ngoba ukusetshenziswa “esangweni yokukhokha, ezifana bitcoin noma ezinye cryptocurrency, usebenzisa peer-to-peer izinhlelo” ukuze ukhokhe “intela kanye izintshisakaza izinhlawulo” ezikweletwa uhulumeni wombuso.
Arizona izishaya baye bathuthela vumela izikweletu ezihlobene tech esikhathini esidlule. entwasahlobo Kugcine, sishayamtsetfo esingakaphothulwa umthetho ibona amasignisha blockchain futhi izivumelwano smart njengoba evumelekile ngaphansi komthetho state. Gov. Doug Ducey wasayina ngesilinganiso ku umthetho Mashi zokugcina.
U.S. inkonzo Onogada ihlele Auction 3,813 bitcoins
U.S. Onogada Izikhungo ngeke Auction off 3,813 bitcoins ashaqe ngokuqondene federal, zezakhamizi kanye amacala zokuphatha. Lezi zinhlamvu nibaluleke cishe $54 abayizigidi ezingu ngamanani zamanje.
Endalini nguMnyango Wezobulungiswa ejensi kuyokwenzeka phakathi nenkathi engamahora ayisithupha ngomhla ka-Jan. 22. I bitcoins siyonikwa ukudayiswa 11 amabhlogo, kunazo zonke kwezingu-elizoquketha 813 bitcoins. Abahlanganyeli ziyadingeka ukwenza idiphozi $200,000, ejensi esitatimendeni ngoLwesine.
US Senate ukubamba umhlangano ukuxoxa cryptocurrencies
U.S. ISigele sika zezezimali iphaneli izobamba a ukuzwa ngenyanga ezayo kanye izimakethe phezulu nabalawuli wezwe ukuxoxa bitcoin kwezinhlansi ukukhathazeka ekuphumeni phezu izingozi cryptocurrencies pose emalini, ngumuntu onolwazi oqondile sendaba atshela Reuters.
Umkhandlu Wezigele Banking iKomiti kuzothatha ubufakazi obuvela Lezimpahla Futures Ukuhweba Commission Chairman Christopher Giancarlo futhi Securities and Exchange Commission Chairman Jay Clayton ekuqaleni kuka-February, kusho umthombo.
Russia uchibiyela cryptocurrency bill: Ukuhwebelana avunyiwe kuphela avunyelwe
Ministry waseRussia Ezezimali izokwenza ngaphezu cryptocurrency semthethweni bill, esizovumela ngidayisa izimpahla ezifana kuphela ezithile “olusemthethweni” Ukuhwebelana.
Isekela Ezezimali uNgqongqoshe Alexei Moiseyev watshela RNS.
Uhlu Ukuhwebelana olusemthethweni uye ayikavunyelwa, namanje kokuba “okuxoxwe”.
Moiseev uqiniseke ukuthi enkonzweni akuwenzi ufuna ukunciphisa ukudluliswa lwemali ezikhona mfihlo, kodwa balindele ukubeka “ezinye uhlobo nohlaka ".
“Ubani mfihlo-zezimali, lutho kuyoba. Kodwa ukuthengwa nokudayiswa ngandlela-thile zenziwe zilandele izilinganiso ezithile. Umqondo ovamile uwukuthi kuyodingeka ukuba athenge futhi athengise izimpahla ku Ukuhwebelana olusemthethweni futhi lokhu okuyothiwa, okusemthethweni.”
Alexey Moiseyev – IPhini likaNgqongqoshe wezeziMali
Ministry of Finance ethulwa ukulawulwa umtlamo Crypto lwemali ngoDisemba 2017, idokhumenti izothunyelwa le Duma State ngo-February 2018. Ministry ukholelwa ukuthi mfihlo-zezimali kufanele kubhekwe impahla, hhayi imali, nezimayini – ziwela ngaphansi kwencazelo yemisebenzi ibhizinisi intela ekhethekile.
Arkansas uthola Bitcoin ATM lokuqala
Ngo Arkansas’ Isakhiwo esiphakeme kunazo zonke ihlala lo bitcoin umshini wokuqala isimo.
Umshini abadonsile kwagxilwa kukho selokhu Novemba lapho yafakwa Isitolo futhi Okuningi Corner Esitezi kwendaba-40 Simmons Tower yedolobha Little Rock.
“Ngiye ayithole ngokungafanele eziningi ngezinyawo traffic nalo,” kusho imenenja esitolo uConnie Davis.
Umshini is owned by Freedom Coin Inc., okuyinto ine ehhovisi eduze Simmons Tower.
Chris Sweeney, wabasunguli futhi isikhulu esiphethe Freedom Coin Inc., futhi K.C. Surrett, Umongameli esiphezulu sezimali, wathi zihlela ukufaka 10-15 imishini ngaphezulu Northwest Arkansas, Fort Smith, Jonesboro nezinye izindawo wedolobha yase-Arkansas.
“Ngicabanga ukuthi ukuvumelana evamile eyokuthi ikusasa zokuhweba uhlaliseke intengo,” Sweeney wathi.
“Kuba njengokungathi esisemthethweni njengoba U.S yethu. lwemali,” Said Duszota, indoda Arkansas wendawo, ikhasimende Bitcoin ATM ngubani kwaxoxwa endaweni yesehlakalo.
INingizimu Korea: Ayikho ihlele ukuvimbela cryptocurrency
Kuleli viki, eziningana bomthombo wezindaba Izitolo libike ukuthi uhulumeni waseNingizimu Korea ihlela ukuba zivimbele cryptocurrency zokuhweba. Ngokuqinisekile akunjalo, njengoba umthethosivivinywa ngabe kudingeka kudlule ingqungquthela yokuqala ngaphambi kokuthi kuthathwe ukusebenza.
Njengoba bewenza kusukela ngoDisemba 13 ka 2017, South Ministry Korea nje ukulungiselela umthetho singase sivale phansi cryptocurrency Ukuhwebelana ezithile. It is not uhlela ukuba zivimbele cryptocurrency ekuhwebeni wesikhathi esifishane.
Uma uhulumeni waseNingizimu Korea okuhloswe ukuba zivimbele cryptocurrency zokuhweba, ke wayeyokwenza kanjalo ngo-December 13, esikhundleni lokukhululwa nezinhlaka ezehlukene zokulawula okwakuhlanganisa kuvinjelwe abezinye izizwe ukuhweba cryptocurrencies.
CCN yembula tekulawula ezine eziyinhloko uhulumeni waseNingizimu Korea kulindeleke ukuba uqalise Januwari 20:
– Vimbela zimali unaccredited kusukela ekubhekaneni ukulahleka ngokusebenzisa cryptocurrencies oluyingozi kakhulu.
– Vimbela wawubekela imithetho eqinile cryptocurrency Ukuhwebelana isebenze ezisekelweni njengoba zokucabangela zimali unaccredited.
– Cela amabhange kanye Ukuhwebelana ukuqinisekisa zimali underaged nabezizwe ayikwazi ukuvula zokuhweba akhawunti cryptocurrency Ukuhwebelana.
– sokumisa okwesikhashana zimali yesikhungo kanye zimali okudayisa kusukela sitshala imali cryptocurrencies.
I South Ministry Korean ka Strategy Nezimali kugcizelelwe ukuthi alivumelani isiphakamiso of Ministry of Justice.
"Asazi ukwabelana imibono efanayo Ministry of Justice ku engase ibe cryptocurrency exchange ukuvinjelwa,"MSF wathi.
Ngokusobala, the cryptocurrency ukuhweba ukuvinjelwa isiphakamiso esingakaphothulwa noma kuvunyelwa South Ministry Korea ka Iqhinga kanye Finance.
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 10 Januwari 2018
Thumela Landelayo:Bitcoin Hardforks kuyini?